काेरोना जितेकी ६१ वर्षीया पानादेवी भन्छिन् : जङ्गलमा गएर दिसापिसाब गर्छु, त्यति दुःख छ – Ktm Dainik
काेरोना जितेकी ६१ वर्षीया पानादेवी भन्छिन् : जङ्गलमा गएर दिसापिसाब गर्छु, त्यति दुःख छ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
काेरोना जितेकी ६१ वर्षीया पानादेवी भन्छिन् : जङ्गलमा गएर दिसापिसाब गर्छु, त्यति दुःख छ
घोडाघोडी । कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत लम्कीचुहा नगरपालिका–१ लम्की भुरुवाकी ६१ वर्षीया पानादेवी विक कोरोनालाई जितेर बिहीबार घर फर्किएकी छन् । विश्वमा महामारीका रूपमा रहेको कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा अहिलेसम्म ४८ जनामा देखिएको छ भने १० जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेको तथ्याङ्क रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ को वीरगञ्जमा श्रीमान्ले सञ्चालन गरेको चिया पसलमा सघाउँदै आएकी विकलाई कैलाली आउनेबित्तिकै लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा रहँदा पनि कुनै लक्षण नदेखिएपछि विकलाई स्वाब सङ्कलन गरी घर पठाइएको थियो । घर पठाइएको तीन दिनमा रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएपछि लम्की क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग नै फैलिएको थियो । संक्रमण देखिएपछि उनलाई धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको थियो । अस्पतालका अनुसार उनको लगातार दुई पटक रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो । उनै कोरोना विजेता विकसँग राससका लागि प्रकाश मिश्रले गरेको कुराकानीः
म वीरगञ्जबाट आउनेबित्तिकै क्वारेन्टाइनमा बसेँ । शुरुमा कुनै लक्षण नदेखिएपछि घर गएँ तर तीन दिनपछि कोरोना लागेको भन्ने खबर सुन्दा डर नलाग्ने कुरै भएन । शुरुमा म धेरै डराएको थिएँ तर पछि लाग्यो, काल नआईकन कसरी मरिएला र? त्यसैले हिम्मत बढाएर बसेँ र कोरोनालाई जितेर घर आएको छु ।
तपाईँलाई कोरोना ठीक भयो भनेर डाक्टरले भन्दा कस्तो लागेको थियो? कसलाई सम्झनुभयो ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, वैशाख ३१ २०७७ १३:५०:३१